प्रदर्शनीको अन्तिम दिनमा एकजना चर्चित नेता ऐना अगाडि आएर उभिए, उनले त्यसमा एउटा कालो कालो धमिलो र अस्पष्ट चित्र देखे र भनेः "मलाई त यो आकृति मन परेन यो त राम्रो छैन ।"
एकजना सानो बालक पनि त्यहा आईपुगेको थियो । ऐनाको अगाडि पुग्ने बित्तिकै उ खुसीले उफ्रीयो। आफूले त्यसमा चमकिलो सफा र सेतो प्रकाशपुञ्ज देखेको बताउँदै उसले भन्यो "यो ऐना त साह्रै राम्रो रहेछ"।
अर्का एकजना बाटोमा हिडदै गरेको सन्तलाई पनि वैज्ञानिकले आग्रह पूर्वक ऐना अगाडि उभ्याए । उनले एकैछिन त्यहाँ दृष्टिगोचर गरे र सामान्य रुपमा आफूले त्यसमा केहि पनि नदेखेको वताए "यो त पानी जस्तो रगंहिन र हावा जस्तो निर्विकार छ "।
एउटै कुराको बारेमा तीन थरी अती विपरीत र पूर्ण भिन्न बक्तव्य आएपछि उपस्थित पत्रकारहरुले वैज्ञानिकलाई सो ऐनाको विशेषता बताइदिन भने । वैज्ञानिक एकैछिन मौन रहे, अनी लामो सास फेरेर बोल्न शुरु गरे: "… यो पनि अरु ऐना जस्तै प्रतिबिम्ब बनाउने ऐना नै हो, …तर फरक यत्ती छ की यसले शारीरीक बिम्ब हैन, मानसिक सोच, चित्त दशा र चरित्रलाई प्रतिबिम्बित गर्छ"
Umesh Gajurel 27/9/09 12:18 PM
सर यो ऐना एक पल्ट हेर्न मन लाग्यो , काहाँ छ होला ??
दीपक जडित 29/9/09 4:19 AM
दिलीपजी म कस्तो देखिन्थें होला नि त्यस्मा अर्थात म के देख्थें होला ? कौतुहल भयो । लौ बनाउनु पर्यो दिलीपजी त्यस्तो ऐना ।
Prajwol 30/9/09 7:16 AM
यो ऐना सांच्चै हुने भए त नेता छान्न यही प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो । तर त्यसमा वैज्ञानिकले थाप एउटा Lie Detector मसिन पनि जोड्नु पर्छ :)
शर्मिला खड्का (दाहाल) 30/9/09 10:58 AM
दिलीप जी लद्युकथा निकै राम्रो लाग्यो । दुःख दिए है दिलीप जी, मेरो ब्लगको सबैभन्दा माथि टाइटलै टाइटल लेखेको ठाउँमा तपाइको जस्तै लिंक बटम-गृहपृष्ठ, लद्युकथा, बिचार जस्तै गरी) राख्न मन लागेको छ । कृपया सहयोग गरिदिनुहोला । जस्तै कथा लघूकथा गीत कविता समीक्षा गरेर
राजेश......रुपान्तरणको खोजीमा 30/9/09 6:56 PM
लघुकथा प्रहार निकै राम्रो लाग्यो । टाँसोको लागि धन्यवाद ।
दिलिप दाई, ‘रिडमोर’को पोष्टले निकै जानकारी गरायो । मेरो ब्लगमा तपाईको थर्डपार्टी रिडमोर राख्न आँटेको छु । सानो समस्यामा छु । यसमा इमेज वास्तविक साइजमा आउँदैन रहेछ । वास्तविक साइजमा राख्न सकिन्छ कि सकिदैन । अथवा इमेजलाई अगाडिपट्टि फूल साइजमा राखेर अनि पोष्ट सारांश राख्न सकिन्छ कि सकिदैन । कृपया झन्झट नमानीकन सहयोग गर्नुहोला । मलाई गा¥ह्रो परेको बेलामा सहयोग गरि रहनुहुन्छ, म तपाईप्रति सधैँ कृतज्ञ रहनेछु ।
TRUE LIFE'S JOURNEY 1/10/09 1:12 PM
गजबको रहेछ !
DEEPENDRA 2/10/09 6:16 PM
Interesting story! you gave more thanamessage here.